Cristiano Ronaldo’oo ay u dhasheen Caruur Mataano ah | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Cristiano Ronaldo’oo ay u dhasheen Caruur Mataano ah
Waxaa la ogaadey in Cayaaryahanka Real Madrid ee Cristiano Ronaldo’Maalinkii Khamiistii ee bishaan ay ahayd 8 loo dhalay 2 Caruur ah oo Mataano ah kuwaas oo ay dhashay Hooyo lagu bacrimiyey shahwada Ronaldo.
Qoyska Cristiano Ronaldo’ayaa sirasmi ah u shaaciyey in wiilkooda loo dhalay laba Mataano ah oo kala ah wiil iyo Gabar loona kala bixiyey Magacyada Eva iyo Mateo,kuwaas oo ku dhashay bariga dalka Maraykanka.
Caruurtaan ayaa lasheegay in ay dhashay gabar Maraykan ah oo aan magaceeda lashaacin taas oo uusan u tagin ama Naageysan Cristiano Ronaldo’ Waxaana lagu bacrimiyey Shahwada Cayaaryaahnka dalka Portugal.
Cristiano Ronaldo’ ayaa horay u dhalay wiil hada 6 sano jir ah oo dhashay Sanadkii 2010 kaas oo sidaan oo kale loogu bacrimiyey Hooyo aan magaceeda ilaa hada lashaacin.
Xidiga Real Madrid ee Ronaldo ayaa dhawaan lashaaciyey in ay uur u leedahay gabadha u dhalatay dalka Spain ee Georgina Rodriguez,Waxaase hada soo baxday lana xaqiijiyey in khamiistii loo dhalay laba Caruur ah oo Mataano ah.
Lama Xaqiijin Sababta markasta Cristiano Ronaldo’ay ugu dhashaan ilmo uusan Hooyadood u tagin ama Gogol laseexan balse Waxaa jira Warar badan oo lagu xanto oo ah in uu yahay mid aan lahayn dareenka Raganimada isla markaana ka mid ah raga laga Roonayaasha loo yaqaan.